Hindiya: Diblomaasiyiinta Soomaaliya Iyo Masar Oo Ka Wada Hadlay Xoojinta Xiriirka Labada Dal – Awdalmedia
Siihayaha Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Hindiya ahna ku-xigeenka safiirka Mudane Saalim Cabdullahi Qalinle ayaa maanta xarunta Safaarada ku soo dhaweeyey Safiir ku xigeenka Safaarada Masar ee Dalka Hindiya u jooga Mr. Sherif Elgammal. Labada mas’uul ayaa is xog waraysi kaddib waxa ay ka wada hadleen arrimaha labada dal.
Ugu horeyn mudane Saalim Cabdullahi Qalinle Siihaya Safaarada ayaa ka warbixiyey xaaladda Guud ee dalka Soomaaliya, waxaana arrimaha ay isla soo hadal qadeen ka mid ah arrimaha doorashooyinka uu dalkeenu galayo xaladaha xanuunka COVID-19 dunid oo dhan hadda wada saameeyay ,arrimaha waxbarashada, dhaqanka iyo kobaca dhaaqaalaha Soomaaliya.
Dhanka kale Mudane Sherif Elgammal ayaa dhankiisa ka waramay xaaladaha dalka Masar sida arrimaha doorashooyinka Barlamaamnka dalka Masar oo dhawaan dhici doona, xaaladda siyaadda dalka iyo arrinta COVID-19.
Labada mas’uul ayaa si aad ah u falanqeeyay xiriirka labada dal ka dhaxeeya oo ah mid taariikh dheer ku sun-tan.
Safaaradaha Soomaliya iyo Masar ayaa ku midaysan ururo dhowr ah sida (African Union (AU) iyo Jaamacadda Carabta (Arab League).
By Mohamad M Hassan